Qofka mas'uulka ka ah habeynta macluumaadka websaydhkan waa:
Maareeyaha guud iyo gudoomiye ku xigeenka 1aad
Hay'ada mas'uulka ka ah waa qofka dabiiciga ah ama sharciga ah ee kaligiis ama dadka kale la shaqeeya go'aaminta ujeeddooyinka iyo habka loo adeegsado xogta shaqsiyeed (sida magaca, cinwaanka e-maylka ama wixii la mid ah) go'aansado.
Kala Noqoshada Ogolaanshahaaga Xog-haynta
Hawlgallo badan oo xog-ururinta ayaa suurtagal ah oo keliya marka oggolaanshahaaga la muujiyo. waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga waqti kasta. emayl aan rasmi ahayn ayaa noogu filan. sharcinimada xog aruurinta la sameeyay kahor kala noqoshada ayaa wali aan saameyn ku yeelan kala noqoshada.
Xuquuqda aad u leedahay in aad cabasho u gudbiso masuulka kormeerka masuulka ah
haddii lagu xadgudbo sharciga ilaalinta macluumaadka, qofka ay khusayso wuxuu xaq u leeyahay inuu u dacwoodo mas'uuliyiinta kormeerka masuulka ah. Awoodda kormeerka masuulka ah arrimaha la xiriira sharciga ilaalinta macluumaadka waa sarkaalka ilaalinta macluumaadka ee dowladda federaalka ee shirkadeena ku saleysan tahay. Liiska saraakiisha ilaalinta macluumaadka iyo faahfaahinta xiriirka lala yeelan karo waxaa laga heli karaa xiriirinta soo socota:
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaad, kaas oo aan si otomaatig ah uga shaqeyno kuna saleyno oggolaanshahaaga ama dhammaystirka heshiiska, oo adiga lagugu wareejiyay ama dhinac saddexaad loo wadaagi karo, qaab mashiin lagu akhriyi karo. haddii aad codsato wareejinta tooska ah ee xogta qof kale oo mas'uul ah, tan waxaa loo sameeyaa illaa iyo inta ay farsamo ahaan suuragal tahay.
SSL- ama. TLS- Diiwan galinta
Goobtani waxay u adeegsaneysaa encryption SSL ama TLS sababo amni dartood iyo inay ilaaliso gudbinta waxyaabaha qarsoon, sida amarada ama weydiimaha aad noogu soo dirto hawlwadeenka goobta. Waad ku aqoonsan kartaa xiriir qarsoodi ah xaqiiqda ah in khadka cinwaanka biraawsarku uu isku beddelo "http: //" oo loo beddelo "https: //" iyo astaamaha qufulka ee khadka biraawsarkaaga.
Haddii SSL ama TLS la hawl geliyo, macluumaadka aad noogu soo gudbiso ma akhriyi karaan dhinac saddexaad.
Qaab-dhismeedka qodobbada sharciga ee lagu dabaqi karo, waxaad xaq u leedahay inaad si bilaash ah u hesho macluumaad ku saabsan macluumaadkaaga shakhsiyeed ee kaydsan, asalkiisa iyo qaataha iyo ujeeddada xog-ururinta iyo, haddii loo baahdo, xuquuqda aad ku sixi karto, xannibi karto ama tirtiri karto xogtan. Waad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta cinwaanka ku qoran sumadda haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo dheeraad ah oo ku saabsan mowduuca macluumaadka shaqsiyeed.
Waxaan halkan kaga soo horjeednaa adeegsiga macluumaadka xiriirka lagusoo daabacay xadka waajibaadka astaanta u leh soo dirista xayeysiinta aan loo baahnayn iyo macluumaadka macluumaadka. Hawlwadeennada bogagga ayaa si cad u xajinaya xaqa ay u leeyihiin in ay qaadaan tallaabo sharci ah haddii ay dhacdo in macluumaadka xayeysiinta la codsado, sida e-maylka spam ee e-maylka.
Xog ururinta websaydhka
Websaydyada qaarkood waxay isticmaalaan waxa loogu yeero cookies. Kukiyada waxyeello kuma leh kombiyuutarkaaga kumana jiraan fayras. Kukiyada waxay u adeegtaa inay ka dhigto degelkeena mid saaxibtinimo leh, wax ku ool ah oo aamin ah. Kukiyada waa faylal qoraal oo yar oo kombiyuutarkaaga lagu keydinayo oo uu dhigayo biraawsarkaaga.
Inta badan cookies aan isticmaalno waxaa lagu magacaabaa "Session cookies". Si otomaatig ah ayaa loo tirtiraa booqashadaada kadib. cookies kale ayaa ku jira qalabkaaga ilaa aad ka tirtirid. Kukiyadaani waxay noo suurta gelinayaan inaan aqoonsano biraawsarkaaga mar kale oo aad booqato.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si laguugu wargeliyo dejinta cookies-ka waxaadna u oggolaaneysaa oo keliya kiisaska shaqsiyaadka, aqbalitaanka kukiyada kiisaska qaarkood ama guud ahaan oo keliya iyo tirtirka otomaatikada ee biraha marka biraawsarka la xiro. Hawlaha websaydhkan waa la xakameyn karaa marka cookies-ka la joojiyo.
Kukiyadaha looga baahan yahay inay fuliyaan nidaamka wada xiriirka elektiroonigga ah ama inay bixiyaan shaqooyin gaar ah oo aad jeceshahay (tusaale ahaan, waxqabadka gadashada wax gadashada) ayaa lagu keydiyaa salka farshaxanka. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO waa la badbaadiyay. Howlwadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dan sharci ah oo ku saabsan kaydinta cookies ka si farsamo ahaan qalad ahaan u khaldan uguna wanaajiyey adeegyadooda. Insofar ahaan sida cookies-ka kale (tusaale ahaan, cookies-ka loogu talagalay falanqaynta dabeecaddaada dusha sare), kuwan waxaa loola macaamilaa si gooni gooni ah bayaanka ilaalinta xogta
bixiyaha websaydhku wuxuu si otomaatig ah u ururiyaa oo u kaydiyaa macluumaadka ku jira faylasha loo yaqaan 'log log server', kaas oo biraawsarkaagu si toos ah noogu gudbiyo. waa:
Nooca biraawsarka iyo nooca nidaamka
magaca martigeliyaha ee kumbuyuutarka
gelitaanka Waqtiga dalabka adeegaha